Ndị na-eme ihe nkiri Retro TV kwesịrị fim nke oge a (Veronica Mars enweghị ike inwe ọ funụ niile) - Ntụrụndụ
Ndị na-eme ihe nkiri Retro TV kwesịrị fim nke oge a (Veronica Mars enweghị ike inwe ọ funụ niile)
Okwu a niile nke Veronica Mars revival na Nwa Nwoke Zute Ụwa usoro nsonye emeela m obi anụrị, mana ọ mekwara m ka m hapụ ụfọdụ arụsị TV m nke ụmụaka ndị ọzọ dị afọ iri itoolu. Enweghị nrụgide, Hollywood, mana aga m aga hụ mmelite ihe nkiri na…
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye na -akwado TV ụmụaka, ọ ga -abụrịrị na ị ga -agbarịrị mmetụta gị na Alex kwesịrị ka fim dị ka Veronica. Biko, ụmụ okorobịa, ọ na -ewute m nke ukwuu Larisa Oleynik. Ọzọkwa, nke a ọ bụ njedebe n'ezie? Ọ dị mwute nke ukwuu! Kedu ihe bụ ihe a, Breaking Bad maka nkeji abụọ?
ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na -enwe mmekọahụ
Melissa Joan Hart nwere akwụkwọ ọhụrụ akpọrọ Melissa kọwara ha niile , yabụ na amabeghị m ihe kpatara na anyị anaghị ekwu maka rom-com nke onye bụbu nwata mara na ọ na-ahụ onwe ya ka okenye tufuru ya. Ikekwe n'ihi na ọ ka na -ama jijiji na okpueze kwa ụbọchị.
Ndị Onye na -ede mmụọ Angtù
Mgbe ụfọdụ ọ na -adị m ka ọ bụ naanị m na -echeta Onye na -ede mmụọ , na nke ahụ bụ ụzọ owu na -ama. Ha nwere ike imelite ihe nkiri: Ọ bụrụ na ha nwere ike idozi ọtụtụ mpụ na PC na-adịghị mma, chee ihe ha nwere ike iji ekwentị nke taa! Ọzọkwa, enwere m nkụda mmụọ dị otu ahụ na bandanna. Ka anyị kpọghachite ya ebe a.
grubhub dozie ọnụ mgbe nnyefe
Ama m na Kenan na Kel enweworị ihe nkiri (sup, Ezigbo Burger ), Ma ebe ọ bụ na m were ha ọ na-arahụ na-aghọ ụwa mbụ ngwa-ngwa-nri moguls, m ga-ahụ n'anya a Richie Ọgaranya -atụgharị aka banyere ha, nke na -akụzi ọgbọ ọhụrụ nke hụrụ soda oroma n'anya. (Kellllll hụrụ soda oroma.)
Ọ dị mma, ugbu a, m na-arọ nnukwu-dị ka, ree mkpụrụ obi m nye ekwensu maka mgbanwe maka nnukwu agụụ na-agụ-mana cheedị echiche ihe ọ ga-adị ka ịhụ ejima okenye na-egwu Michelle torola Ụlọ juru eju sochie. Dịka m nwere ike ịkọ, Michelle ga-abụ onye mgbasa ozi nwere ikike dị elu na bachelorette kachasị ruru eru na New York City, nke ndị enyi ya dị iche iche na-atụ egwu na-atụ egwu kredit nwa agbọghọ ya mgbe niile. , onye ga -enwe ike hụ nwa ehi gbara ọtọ n'anya ma ọ bụ ihe ọ bụla. Naanị m na -agbụ mmiri mmiri ebe a.
Kedu ọkacha mmasị TV telivishọn ị ga -achọ ịhụ ọzọ?
Ego ole bụ iwepụ ntutu laser maka agba
kedu ka m ga -esi mara ma ị bụ ezigbo onye nsusu ọnụ
tima tima kacha mma
ntu ntu nke na -eme ka mbọ sie ike
mbọ acrylic na -acha anụnụ anụnụ na ọla edo